Bit By Bit - su'aalo Waydiinta - 3.4.3 baarka Non-itimaalka: dhigma muunad
Tijaabooyinkii aan jaaniska Ma aha waa isku mid. Waxaan ku dari kartaa gacanta badan oo ku saabsan dhamaadka hore.
hab Wang iyo asxaabteena loo isticmaalaa in la qiyaaso natiijada doorashada madaxtinimada ee 2012 Maraykanka oo gebi ahaanba ku xiran horumarka ee falanqaynta xogta. Taasi waa, waxay la soo ururiyay jawaabo badan intii ay kari waayeen ka dibna isku dayeen in ay dib-u-miisaanka iyaga. istaraatijiyad A kaabaha la sampling aan jaaniska ka shaqeeya waa in ay leeyihiin awood badan ku habka xog ururinta ah.
Tusaalaha ugu fudud ee aan jaaniska geedi sampling qayb ahaan ay gacanta ku waa sampling kootada, farsamo ah in dib u ahayd maalmihii hore ee cilmi baadhitaan. In sampling kootada, cilmi dadweynaha kooxo kala duwan (tusaale ahaan, ragga dhallinyarada ah, haweenka dhallinyarada ah, iwm) iyo kootada markaas set for tirada dadka kala qaybiyaan in la soo xulay koox kasta. Jawaab lagu doorto hab qasay.Shacabka ilaa cilmi baare ayaa la kulmay ay kootada ee koox kasta. Sababtoo ah ee kootada ah, muunad ka dhalanaya u muuqataa dheeraad ah sida dadka diirada u badan noqon lahaa run haddii kale ah, laakiin maxaa yeelay, ixtimaalka ee ka mid noqoshada waa la aqoon cilmi badan oo ka shakisan yihiin ee sampling kootada. Dhab ahaantii, sampling kootada ahaa sabab u ah "Dewey Guulaystay Truman" Baadi ee 1948 tiriyey US Madaxweynaha. Sababta oo ah waxa ay bixisaa qaar ka mid ah gacanta ku habka ururinta, si kastaba ha ahaatee, mid ka mid arki kartaa sida sampling kootada laga yaabaa in qaar ka mid ah faa'iidooyinka badan xog ururinta a gebi ahaanba caasiyoobay.
Ka gudubka sampling kootada, habab dheeraad ah oo casri ah si loo xakameeyo nidaamka aan jaaniska sampling hadda waa u suurtoobaan. Mid ka mid ah hab oo kale waxaa loo yaqaan ku habboon tijaabada, iyo waxa loo isticmaalaa by qaar ka mid ah bixiyeyaasha guddi online ganacsi. In qaabka ugu fudud, ku habboon muunad u baahan tahay laba ilaha xogta: 1) diiwaanka dhamaystiran ee dadka iyo 2) guddi badan oo iskaa wax u qabso. Waxaa muhiim ah in iskaa wax u qabso ah ma u baahan tahay in muunad ixtimaalka ka dadka wax a, in ay xoogga saaraan in ay jiraan wax loo baahan yahay waayo doorashada galay guddiga, waan ku soo wici doonaa guddi wasakh ah. Sidoo kale, labada diiwaanka dadweynaha iyo guddiga wasakh waa inay ku jiraan qaar ka mid ah macluumaadka ku saabsan kaabayaal ah qof kasta, in tusaale ahaan this, waxaan ka fiirsan doonaa da'da iyo jinsiga, laakiin xaaladaha macquul this macluumaad kaabayaal ah ayaa laga yaabaa inuu wax badan ka badan faahfaahsan. Trick ee ku habboon muunad waa in ay doortaan baarka ka guddi wasakh hab u soo saarta baarka u eg tijaabada ixtimaalka.
ku habboon Sample bilaabmaa marka muunad itimaalka Yururb waxa laga soo qaatay diiwaanka dadweynaha; this muunad metelay noqdo muunad bartilmaameed u ah. Markaas, ku saleysan macluumaadka kaabayaal ah, kiisaska in saamiga bartilmaameedka waxaa lagu aaddiyaa si dadka in goluhu wasakh si ay u sameeyaan tusaale kulan. Tusaale ahaan, haddii ay jiraan dumar jir 25 sano ah ee saamiga bartilmaameedka, ka dibna cilmi helaa 25 sano jir ah ka soo guddiga wasakh dumar ah in ay saamiga kulan. Ugu dambeyntii, xubnaha tijaabada kulan waxaa la waraystay in ay soo saaraan set kama dambaysta ah ee soo jawaabay.
Inkastoo saamiga kulan u eg saamiga bartilmaameedka, waxaa muhiim ah in la xasuusto in saamiga kulan ma aha muunad jaaniska ah. baarka kulan dhigma karaa oo kaliya tijaabada bartilmaameedka on macluumaadka loo yaqaan kaabayaal ah (tusaale ahaan, da'da iyo jinsiga) ah, laakiin aan on sifooyinka unmeasured. Tusaale ahaan, haddii qof uu goluhu wasakh u muuqdaan in ay ka miskiinsan-ka dib oo dhan, hal sabab inuu ku biiro guddi baadhitaan waa inay lacag-markaas kasban xitaa haddii saamiga kulan u eg saamiga bartilmaameedka la eego da'da iyo jinsiga waxaa weli heysan doono eexda xagga dadka saboolka ah. Sixir ee sampling itimaalka run yahay inuu meesha ka saaro dhibaatooyinka on sifooyinka qiyaasay oo unmeasured labadaba (hal dhibic waafaqsan doodan ku habboon for baxayn sababaha daraasaadka dheehidda Cutubka 2 our).
In dhaqanka, u dhigma muunad ku xiran isagoo guddi ballaaran oo kala duwan u xiiseynayey in ay buuxiso sahan, oo sidaasay inta badan waxaa loo sameeyaa by shirkadaha bixin karin si ay u horumariyaan oo ay u ilaaliyaan guddi noocan oo kale ah. Sidoo kale, ku dhaqanka, waxaa jiri kara dhibaatooyin la xiriira ku habboon (oo mararka qaarkood ciyaar wanaagsan qof ee saamiga bartilmaameedka kajirin ee guddiga) iyo kuwa aan jawaab (oo mararka qaarkood dadka ku jira tijaabada kulan diido in ay ka qayb sahanka). Sidaa darteed, ku dhaqanka, cilmi samaynaya u dhigma muunad kaloo samayn nooc ka mid ah sixitaanka post-stratification in la sameeyo qiyaas.
Waa adag tahay in ay bixiyaan ballan teori waxtar leh oo ku saabsan ku habboon tijaabada, laakiin dhab ahaan si fiican u samayn kartaa. Tusaale ahaan, Stephen Ansolabehere iyo Brian Schaffner (2014) la barbar dhigo saddex sahan isku midka ah ee ku saabsan 1,000 oo qof sameeyay sanadkii 2010 iyadoo la isticmaalayo saddex sampling kala duwan iyo hababka waraysiga: mail, taleefanka, iyo guddi Internet ah la isticmaalayo dhigma muunad iyo sixitaanka post-stratification. Qiyaasta ka saddexda waji ahaayeen arrin la mid ah qiyaasaha ka bartilmaameedyo tayo sare leh sida Survey hadda Dadweynaha (CPS) iyo Waraysi Caafimaadka Qaranka Survey (NHIS). More si gaar ah, labadaba sahan Internet iyo mail ahaayeen off by celcelis ahaan boqolkiiba 3 dhibcood iyo sahan phone ahaa off by boqolkiiba 4 dhibcood. Khaladaadka this badan yihiin qiyaastii waxa ka mid fili lahayd ka-baarka oo ku saabsan 1,000 qof. Inkastoo, mid ka mid ahaa qaabab kuwaas oo soo saaray xogta ku ool ah si fiican, sahanka labada internetka iyo telefoonka (oo qaatay maalmo ama toddobaadyo) ku ool ah si dhakhso ah ay ahaayeen in ay beerta ka sahan boostada (oo qaatay sideed bilood), iyo sahanka Internetka, taas oo loo isticmaalo ku habboon muunad, ahayd ka jaban tahay labada kale hababka.
Gebogebadii, saynisyahano bulshada iyo statisticians waa cajiib walaacsan go'aano ka baarka non-itimaalka, in qayb ka mid maxaa yeelay, waxay yihiin qaar ka mid ah ee la xidhiidha fashilaad ceeb cilmi sahan sida ra'yiururin Suugaanta Dhayjast. In qayb ka, waxaan la shaki Taasuna waxay raacsan: baarka aan jaaniska unadjusted ay u badan tahay in ay soo saaraan qiyaasaha xun. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay cilmi qabsato kartaa eexasho ee nidaamka sampling (tusaale, post-stratification) ama xakameeyo nidaamka ururinta xoogaa (tusaale, saamiga ku habboon), waxay soo saari kartaa qiyaasta wanaagsan, iyo xataa qiyaasaha tayo ku filan ujeedada ugu. Dabcan, waxaa u roon in ay sameeyaan sampling itimaalka dhammaataan toogasho ah, laakiin mar dambe u muuqda in doorasho macquul ah.
Labada shay-baarka aan jaaniska iyo tijaabada ixtimaalka kala duwan yihiin in tayada, iyo hadda waxa ay u badan tahay waa kiiska in qiyaasta ugu badan tijaabada ixtimaalka badan yihiin Aamin badan qiyaasaha ka baarka aan jaaniska. Laakiin, xitaa hadda, qiyaasaha ka baarka aan jaaniska iyo sidoo kale-sameeyay waa laga yaabaa in ka sii wanaagsan tahay qiyaasta ka tijaabada ixtimaalka liidata-sameeyay. Dheeraad ah, tijaabada aan jaaniska waa wayn ka jaban. Sidaas darteed, waxa ay u muuqataa in jaaniska vs sampling aan jaaniska bixisaa ah ganacsiga-off tayada qiimaha-(Jaantuska 3.6). Weeraryahanka Raadinta, waxaan filaynaa in qiyaasaha ka baarka aan jaaniska si fiican loo sameeyo waxay noqon doontaa jaban iyo ka wanaagsan. Dheeraad ah, sababtoo ah burburka ee sahan telefoonka guriga iyo kan heerka sii kordhaya ee non-jawaab, Waxaan filayaa in tijaabada ixtimaalka uu noqon doonaa mid qaali ah oo dheeraad ah oo tayo hoose. Sababtoo ah oo ka mid ah isbeddellada muddada-dheer, waxaan u malaynayaa in sampling aan jaaniska u noqon doonaa kordheysa muhiim ah in xilligii saddexaad ee cilmi baadhitaan.
Jaantuska 3.6: sampling itimaalka ku dhaqanka iyo sampling aan jaaniska labaduba waa weyn, qaybaha Nuurre Aw. Guud ahaan, waxaa jira a kharash-baadi ganacsiga-off iyadoo sampling aan jaaniska isagoo qiimaha hoose laakiin qalad sare. Si kastaba ha ahaatee, si fiican loo sameeyo sampling aan jaaniska soo saari kartaa qiyaasta ka khayr badan sampling itimaalka liidata-sameeyo. In mustaqbalka, waxaan filaynaa in sampling aan jaaniska heli doontaa si fiican oo jaban, halka sampling ixtimaalka ka sii daro oo ka qaalisan doonaa.